संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरेपनि प्रादेशिक सरकारहरुको अधिकार र कर्तव्यहरुको नाक–नक्सा तयार भएको छैन ।
पूर्ण वहुमत सहितको स्थायी सरकार ः यो देशले विगत सात दशकमा देखेको पहिलो र एकमात्र सपना हो । सपना पूरा भएको छ । देशमा अहिले स्थायी सरकार छ । पाँच वर्षसम्म यो सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले यो सरकारलाई हपार्न सक्थिन होला । तर, प्रोटोकल मिलेन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले देशको सक्रिय नेतृत्व कार्यकारी राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णय संसदबाट पारित गरायो भने त्यो अवस्थामा पनि वर्तमान राष्ट्रपतिको शासन चल्दैन ।अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा देशको कार्यकारी राष्ट्रपतिका आकांक्षीहरु संसदभित्रै छन । त्यतिवेला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालका वीच सौजन्य यथावत रहेपनि टक्कर दह«ै रहला । अहिलेलाई यो बिषयको कल्पना नै नगरौं । त्यस्तो कल्पनाले अरु परा–काल्पनिक जस्तो लाग्ने कल्पनालाई छेउ लगाइ दिन्छ । वर्तमान सरकारले नेपालको समृध्दि अभियान चलाएको छ । देश द्रूततर गतिले अघि वढदैछ । यस्तो अवस्थामा सरकार विचलनका सम्भावनाहरुलाई समेत ढिम्किन दिनु हुँदैन । संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरेपनि प्रादेशिक सरकारहरुको अधिकार र कर्तव्यहरुको नाक–नक्सा तयार भएको छैन । चुनावमा प्रतिपक्षीहरुको पराजय भएपनि उनीहरु सखाप भएका होइनन । कुनैपनि संस्था आफैंमा अविच्छिन्न हुन्छन । वहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा संसदमा दलहरुको उपस्थितिले मात्र राजनीतिक अवस्थालाई निर्देश गर्दैन । लोकतन्त्रमा जनताको आवाज सुन्नैपर्ने हुन्छ । अहिले संसद र सरकारभन्दा माथि उठेर एमाले र माओवादीले पार्टी एकीकरण गरेका छन । अहिले भएको दुइ पार्टी वीचको एकताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकै बनेको छ । पार्टीका नीति–निर्माता र नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुले जानी वुझीकनै पार्टीको नामपछि ब्राकेटमा (एमाले) शव्द राखेका हुन । यो एकतामा सामेल भएका दल, गूट र समूहहरु वीचको सम्वन्ध असुविधाजनक रहेको खण्डमा ब्राकेट भित्रको नेकपा लिएर कुनैपनि पार्टी छुट्टिन सक्दछ । अहिले नै पनि उपेन्द्र यादवको पार्टी सरकारमा छ । उनी वाहेकका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरु सरकारको काम गराइ र मिचाहा प्रवृत्तिको विरोधमा छन । नेकपासंग अहिले दुइ तिहाईभन्दा वढीको समर्थन छ संसदमा । तर, यसको व्यवस्थापन कति गाह«ो छ भन्ने देखिइ सकेको छ । प्रोपगण्डाले दुनियाँलाई भ्रमित वनाएर सरकार जव एक्लै दौडिन थाल्दछ, तव त्यसको कमजोरी थाह हुन्छ । अहिले त्यही भइ रहेकोछ । सरकार गठन भएको पाँच महिना भै सक्यो र पनि सरकार आफना उपलव्धिहरुको खोजीमा छ । वर्तमान सरकारका विरुध्द चुनावमा रहेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आकार अलिकति घटेकोछ । तर, प्रभाव खुम्चिएका छैन । कांग्रेसका नेताहरुलाई प्रतिपक्षको हैसियत प्रतिनिधिहरुको संख्याले होइन, जनताको पक्षमा उनीहरुले उठाउने विषयमा भर पर्दछ ।स्वास्थ्य शिक्षामा आमूल सुधारका लागि पटकपटक अनसनवस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले एकपटक फेरी अनसन वसेर देशमा हलचल ल्याएका छन । मांगहरुको फिहरिस्तमा नगै व्यापक अर्थमा वुझदा डा. केसी अहिले स्वास्थ्य–शिक्षाको सुधारमा सरकारले देखाएको धिंग्न्याईको विरुध्दमा छन । स्वास्थ्य विज्ञान पढन चाहने विद्यार्थी र सजिलो हिसावले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने जनताको मांग नमानेसम्म गोविन्द केसीसंग सरकार सहमतिमा पुग्दैन । विगतका अनुभवहरुले पनि वताएका छन, सरकार स्वास्थ्य शिक्षामा निजी क्षेत्रको सक्रिय संलग्नताको पक्षमा छ । अहिले निष्पक्ष हिसावले सरकार र डा. केसीका गतिविधिको अवलोकन गरी रहेकाप्रवुध्द नागरिकहरु यो विषयमा केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदन यथावत स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन । देशको बिल्लीवाठ होला भनेर नेपाली जनता डराएका छन । जनताको यो भय नाजायज छैन । यो सवैलाई थाह छ ः वर्तमान सरकार जनतासंग सोझो सरोकारराख्ने यस्ता सानातिना खुद्रे समस्यामा अल्झिन चाहँदैन । सरकार रेल, पानी जहाज र ठूला–ठूला विकासका काममा लागेको छ । प्रम ओली सरकारको प्रोपगण्डा विभागले वितेका पाँच महिनामा ।।।गरेको’ एक दर्जनभन्दा वढी कामको फेहरिस्त तयार पारेको छ । यो हास्यरस प्रधान फेहरिस्तमा उल्लेख भए अनुसार वर्तमान सरकारले भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी सतलजले निर्माणगर्न लागेको विद्युत आयोजनाको शिलान्यास, विराटनगरमा भएको भारतीय क्याम्पको विस्थापन तथा भारत र चीन दुइ छिमेकीसंगको नीतिमा सन्तुलन ल्याएको छ । यही पाँच महिनामा सरकारले सुन तस्करीको जालो तोडने काम गरेको छ भने वैदेशिक रोजगारीको ठगी नियन्त्रणमा आक्रामक प्रयास गरेको छ । तर, दुइ तिहाइ वहुमतको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारले विवादमुक्त बजेट ल्याउन सकेन । महंगी नियन्त्रण हुन सकेन । सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौंको मुहार चम्काउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई अलिकति पनि जाँगरिलो वनाउन सकेन । दैनिक रुपमा जनताले महंगीको ऐंठन बेहोर्नुपरी रहेकोछ । हिजो राजधानी शहर काठमाडौंमा मात्र महंगीको ऐठन थियो । आज महानगर र नगरपालिकाको संख्या वढेको छ । नयाँ वनेका पालिकाहरुले मसानको उपयोगमा समेत कर लगाउन थालेका छन । दुनियाँ कठिनाईमा छ । यसलाई हटाउन सरकार अलिकति पनि अघि सरेको छैन । मन्त्रीहरु भन्दछन – अहिलेको यो सरकार स्थीर सरकार हो । स्थीरको अर्थ अचल पनि हुन्छ । यो सरकार अहिले जसरी नै अचल रहने हो भने आगामी पाँच वर्षमा सरकारलाई खियाले खुइल्याइ सकेको हुनेछ । वर्तमान सरकारका केही मजवूत पक्षहरु पनि छन । यो जति अचल छ त्यत्ति नै चन्चल छ । साविक समय हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म धेरै मन्त्रीहरुको मान मर्दन भै सकेको हुन्थ्यो । कति त वाहिरिइ सकेका पनि हुन्थे । तर, दुइ पार्टी र तमाम समूह मिलेर ओली र दाहालको आकांक्षालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गरेका छन । समृध्द नेपालको अभियानमा लागेका नेताहरुलाई शासन संचालनगर्ने फुर्सद छैन । समृध्दिको पथ पहिल्याउन लागेका नेताहरुलाई स–साना समस्यामा अल्झाउनु उचित छैन । विस्तारै जनताले आफैं सिक्दै जान्छ । माओत्से तुंगले भनेका छन, जनताबाट सिक । जनताबाट सिक्ने कुरा त आफनो ठाउँमा छँदैछ । तर, त्यो जनता कहाँ छ जसबाट हामी केही कुरा जान्न र सिक्न सकौं ।